Android share menu ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ Androidsis
Android share menu ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုသင်မည်သို့လေ့လာရမည်ကိုကျွန်ုပ်လေ့လာပါမည် သင်၏ Android terminal ၏ share menu ကိုပြောင်းပါအထူးသဖြင့်သင့်မှာ Android သန့်ရှင်းတဲ့ terminal ရှိပြီးသင့် system ထဲကိုထည့်ပြီးသား share menu ကိုငြီးငွေ့နေလျှင်။
အကောင်းဆုံးတစ်ခုကတော့ Android အတွက်ရိုးရိုး application တစ်ခုကိုရိုးရိုးလေး download နှင့် install လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းကို default application အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းမှအပယခင် configuration ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပင်မလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ , ဒါ့အပြင်သင့်မှာ rooted terminal သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုရှိရန်မလိုအပ်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်မည့်လျှောက်လွှာကိုစတင်ရန် Google Play Store တွင်အခမဲ့ကြော်ငြာနှင့်မည်သည့်ကြော်ငြာအမျိုးအစားမျှမပါဘဲ၎င်း၏အမည်အောက်တွင်၎င်းကိုတိုက်ရိုက်ရှာနိုင်လိမ့်မည်။ မျှဝေသူ ပြုစုသူ REJH Gadellaa မှဖြစ်သည်။
1 Sharedr ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
2 Sharedr application ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်၏ Android ၏ share menu ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကျွန်ုပ်ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။
Sharedr ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
ရေးသားသူ: REJH Gadellaa ဖြစ်သည်
Sharedr application ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်၏ Android ၏ share menu ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကျွန်ုပ်ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။
လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုရန် မျှဝေသူ, အစဦးတွင် Android 5.0 terminal တစ်ခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောဗားရှင်းရှိရန်သာလိုအပ်သည်ပြီးတော့၊ ငါမူအရပြောရရင်အဲဒါကဒါကကြောင့်ပါ သင့်မှာသင့်လျှော်တဲ့ Android version ရှိရင်တောင်သူက Android terminal အားလုံးမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး.
နောက်ပြီးပူးတွဲပါဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီ post ရဲ့အစမှာထားခဲ့ရတာပါ။ Huawei ရှိ EMUI ကဲ့သို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်အလွှာများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများအတွက်ထုတ်လုပ်သူမှခြယ်လှယ်ထားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဤ application သည်စနစ်၏ share menu ကိုအစားထိုးရန်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ကြောင်းပျက်ကွက် ၎င်းကိုမူရင်း EMUI ဝေစုမီနူးအတွင်းမှအခြားရွေးစရာတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည် ဒီရိုးသားစွာအားလုံးအဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့နှင့်အဘယ်ကြောင့်လျှောက်လွှာရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏ပေမယ့်။
EMUI နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည့် Samsung, HTC, LG, Sony နှင့် Xiaomi ကဲ့သို့သောထုတ်လုပ်သူများထံမှစိတ်ကြိုက်အလွှာများနှင့်အတူဖြစ်ပျက်နိုင်သည်။.
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ် ပုံမှန်ရှယ်ယာမီနူးကိုပြောင်းရန်ရွေးချယ်မှုကိုစစ်ဆေးပါ ဤအန်းဒရွိုက်ဆိပ်ကမ်းများ၏အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးတွင်၊ သင် application ကို install လုပ်သော Android terminal အမျိုးအစားနှင့်ဤအတွက် Android share menu ကိုပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုမှတ်ချက်ပေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောအသစ်တစ်ခုကို မျှဝေသူ.
အနည်းဆုံးတော့ငါဟာသန့်ရှင်းတဲ့ Android ပါတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုသုံးပြီးစမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ ဒီထက်မြန်။ ပိုပြီးသေးငယ်တဲ့အရာအဖြစ် Android အတွက် default အနေဖြင့် share menu ကိုပြောင်းလဲပါ အနည်းဆုံးပထမတစ်ချက်မှာပိုပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ခံစားမှုကိုပေးပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android share menu ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
လွန်ခဲ့တဲ့နာရီအနည်းငယ်ကပဲ Telegram မှာရှိတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာငါထပ်တူထပ်မျှမေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာဒီ post အကြောင်းပါ။ ငါ့မှာ Android5ပါတဲ့ Samsung S6.0 ရှိတယ်။ သူက share menu ကိုအစားထိုးမယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ menu ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဒါမှမဟုတ် order ကိုပြောင်းဖို့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုမတွေ့ရဘူး၊ default အနေဖြင့် Telegram မှဖြစ်စေ WhatsApp မှဖြစ်စေအချို့သော chats များကိုပြသသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤ app ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီး၎င်းကိုစွန့်ခွာမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ဤ app ကိုဝေမျှခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။